မြန်မာဝမ်ပေါင် ကုမ္မဏီတာဝန်ခံ ဖြေရှင်းချက် (အပိုင်း - ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄) | Myanmar Yang Tse Copper Mine | MYTCL
နိုဝင်ဘာလ 14 2013
မြန်မာဝမ်ပေါင် ကုမ္မဏီတာဝန်ခံ ဖြေရှင်းချက် (အပိုင်း - ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄)
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာ အခြေစိုက်ထားတဲ့ ကြေးစင်တောင်၊ စံပယ်တောင်၊ စံပယ်တောင် (တောင်ပိုင်း) နဲ့ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း လေးခုကို၊ "မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင် လီမိတက်" Myanmar Economics Holding Ltd. (MEHL) နဲ့ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်နေပြီး တရုတ်နိုင်ငံက လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ ကုမ္ပဏီကတော့ "မြန်မာ ဝမ်ပေါင် ကြေးနီသတ္ထုတူးဖေါ်ရေး လီမိတက်" Myanmar Wanbao Mining Copper Ltd. (MWMCL) ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ (၄)ရက်နေ့က၊ ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီရဲ့ ဖိတ်ခေါ်ချက်နဲ့ ဒီ ကြေးနီစီမံကိန်း လေးခုထဲက အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ လက်ပံတောင်းတောင်က ကြေးနီသတ္ထုတူး ဖေါ်ရေးနယ်မြေရုံးမှာ ဗွီအိုအေဝိုင်းတော်သား ဦးရော်နီညိမ်းက သွားရောက်ပြီး ဦးဆောင်ညွှန်ရေးမှူး Mr. Geng Yi ကို သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ရဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ လက် ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဒီအစီရင်ခံစာ အတိုင်း အကောင်အထည်ဖေါ်ရေး အစိုးရဖွဲ့စည်းပေးတဲ့ ကော်မတီတစ်ရပ်လည်း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ "မြန်မာ ဝမ်ပေါင် ကြေးနီသတ္ထုတူးဖေါ်ရေး လီမိတက်ရဲ့ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မယ့် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ Mr. Geng Yi နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း (အပိုင်း - ၁) ကို၊ ဒီသီတင်းပတ်ရဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးရာကဏ္ဍကနေ ထုတ်လွှင့်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ ကျနော်တို့ရဲ့ အင်တာဗျူးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ (စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး) ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာနဲ့ စလိုက်ကြရအောင်လား။ တခြားဟာတွေ ကတော့ ဖြစ်ပြီး သွားတဲ့ကိစ္စတွေ ဖြစ်သလို၊ အားလုံးဟာလည်း မီဒီယာတွေပေါ်မှာ ရှိနေကြလို့ လူတိုင်းလိုလို သိပြီးနေကြပါပြီ။ ကျနော်တို့ အတိတ်ကို ပြန်မသွားချင်ပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ အစီရင်ခံစာအရ၊ အားလုံးကို ခြုံပြီးပြောထားတဲ့ ဒီအစီရင်ခံစာရဲ့ အဆုံးသတ်ကောက်ချက်မှာ နိုင်ငံကိုအကျိုးရှိစေမယ့်၊ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကို အကျိုးရှိစေမယ့် စီမံကိန်းတစ်ရပ် အနေအထားဖြစ်ပေမယ့်၊ အကြီးမားဆုံးပြဿနာနဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပွားစေရတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အကြောင်းရင်းခံဟာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဒီ ကော်မရှင်က ထောက်ပြထားပါတယ်။ အရင်က ဆိုရင်၊ ဒီစီမံကိန်းမှာ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတဲ့သူတွေကော ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်သူ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင် လီမိတက်ကော ဘာတွေလုပ်နေကြသလဲဆိုတာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိဘူး၊ လူတွေ မသိနိုင်ခဲ့ဘူး။ အများပြည်သူ မသိနိုင်ဘူး။ ဒီကိစ္စဟာ ကျနော့်ရဲ့ အင်တာဗျူးမှာ အစိပ်အပိုင်းတစ်ပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာရဲ့ အဆုံးသတ်ကောက်ချက်ကို ခင်ဗျားလည်း သိပြီးပြီပဲ။ အဲဒီတော့ ဒီစီမံကိန်းကို ရှေ့ဆက် လုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အခြေအနေအတွက်၊ ခင်ဗျား ဘယ်လို ပြင်ဆင်ထားပါသလဲ၊ ဘယ်လို စတင်ဆောင်ရွက်မှာပါလဲ ခင်ဗျ။
Geng Yi ။ ။ ခင်ဗျားမေးတာကို ကျနော် ကောင်းကောင်းနားလည်ပါတယ်။ ဒါဟာ မေးခွန်းကောင်းတစ်ခု လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် အတိတ်မှာ အခက်အခဲတစ်ချို့ နားလည်မှုလွဲမှားခြင်း တစ်ချို့နဲ့ ပြဿနာတစ်ချို့တွေတောင်မှ၊ ဒီ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ကိစ္စရပ်ကနေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျနော် တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ ဒီလိုဖြစ်နေခဲ့တာကို ကျနော်တို့က ဘာမှမလုပ်ပဲ မနေခဲ့ဘူး ဆိုတာပါ။ ကျနော့်ရဲ့နားလည်မှုအရ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဟာ ထိတွေ့ဆက်ဆံနေမှုနဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက် ဆက်စပ်နေပါ တယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဟာ မလုံ လောက်ခဲ့ဘူး၊ အခြေအနေတွေ ပိုဆိုးသွားခဲ့တယ် ဆိုတာကို၊ ကျနော်ဝန်ခံပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကော်မရှင် အစီ ရင်ခံစာက အကြံပြုထောက်ပြထားတဲ့ ဒီပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိစ္စ တိုးတက်လာအောင် ရှေ့လျှောက် ကျနော်တို့ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ? ဒီလို တိုးတက်မှုရရှိရေးဟာလည်း ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။
ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ ရှုမြင်ချက်အရ၊ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကို မတူညီတဲ့အဆင့်တွေမှာ ကျနော်တို့က အားဖြည့်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ အဲဒီလို အားလုံးသော ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေ လုပ်ကြတဲ့အထဲမှာ အရေးကြီး အခရာကျတဲ့အပိုင်းဟာ တစ်ဘက်သားရဲ့ပြောစကားကို နားထောင်ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်ယုံကြည်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် အခုက စပြီးတော့ကော၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကာလ မတိုင်မှီနဲ့ အဲဒီကာလအတွင်းမှာကော၊ နောက်ပိုင်းတွေမှာကော၊ ကျနော်တို့ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ရှေ့ ကိုလည်း ကြိုးစားသွားပါမယ်။ ပထမဆုံးတော့ ပြည်သူလူထုနဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ တောင်းဆိုမှုတွေ တိုင်တန်းချက်တွေ ခံစားနေကြရတာတွေကို ကျနော်တို့ နားထောင်ကြရပါမယ်။ အခြေခံအားဖြင့် ကျနော်တို့ရဲ့ ဒီ ပတ်ဝန်းကျင် ဒေသတစ်ဝိုက် လူ့အဖွဲ့အစည်းက အသံတွေကို ကျနော်တို့ နားထောင်ကြရပါမယ်။ သူတို့နဲ့ ကျနော်တို့နဲ့ အတူတကွ အပြန်အလှန်ထိတွေ့နေကြရပါမယ်။ ရေရှည်မှာ ကျနော်တို့ရဲ့ ဒီပွင့်လင်းမြင်သာရေး စီမံချက်ကို အထောက်အကူပေးဖို့မှာ အဓိကအခရာကျတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ဒီဒေသခံလူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ဒီပတ်ဝန်းကျင်က ကျနော်တို့ရဲ့ ပြည်သူလူထုတွေနဲ့ ကျနော်တို့ အချိန်မှန်ပုံမှန် ထိတွေ့နေ ကြရပါမယ်။ အဲဒီလိုပဲ တစ်ဆင့်တက် ပြီးတော့ ပိုမိုကြီးမားတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ မြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး ရှိနေသလို၊ ကျနော်တို့ကို ကြီးကြပ်မယ့် အစိုးရအာဏာပိုင်တွေလိုမျိုးတွေ၊ လူထုအခြေပြု လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ အစိုးရမဟုတ် တဲ့ NGO တွေလည်း ရှိနေကြပါတယ်။ အဲဒီလို အဆင့်တွေ အမျိုးမျိုးရှိကြတဲ့ အထဲမှာ၊ ဒီဒေသခံ လူ့အဖွဲ့အ စည်းအဆင့်နဲ့ ထိတွေဆက်ဆံမှုတွေကို ကျနော်တို့က အားဖြည့်ချင်ပါတယ်၊ တိုးတက်အောင်လုပ်ချင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအဆင့်ကတော့ ခုနကပြောတဲ့ တစ်ဘက်သားရဲ့စကားကို နားထောင်ခြင်းပါ။ အဲဒီကနေ ဒီပွင့်လင်း မြင်သာမှုကိစ္စအတွက် အဆင့်ဆင့်သော ပြည်သူလူထုရဲ့ နားလည်သဘောပေါက်မှုတွေ အိုအပ်ချက်တွေကို နားထောင်ကြရပါမယ်။ ဒီဒေသခံ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေကို တုန့်ပြန်လုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ၊ သူတို့လိုအပ်ချက်တွေကို ကျနော်တို့က ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရပါမယ်။ ပြီးတော့လည်း ကျနော်တို့ရဲ့ ဒီဒေသခံ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ ကျနော်တို့နဲ့အတူ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့၊ ကျနော်တို့က ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ လည်း ကျနော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကနေ နှစ်ဘက်လုံးအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အနာ ဂတ်တွေ ပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ၊ အများပြည်သူနဲ့ ခင်ဗျားတို့က ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံချင်တယ်? သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေ သူတို့ခံစားနေကြရတာတွေနဲ့ ခင်ဗျားတို့က ပိုမိုထိတွေ့ချင်တယ် ဆိုတော့၊ ဒါကို ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖေါ်ကြမှာပါလဲ။ ကျနော်ဆိုလိုတာက ခင်ဗျားတို့ဖြစ်စေ ခင်ဗျားတို့နဲ့ ဖက်စပ်ပါတနာ (partner) ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက်ကဖြစ်စေ၊ ဒီဒေသမှာ လူထုနဲ့ ဆက်ဆံ ရေးရုံးတွေ ဖွင့်ထားမှာလား။ (လူထုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး) ခင်ဗျားတို့ လုပ်ချင်တာတွေအားလုံးကို ဒီလို ကြားခံ အခြေအနေကနေ လုပ်ကြရတော့မယ်။ အများပြည်သူနဲ့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေက ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။ ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လိုစဉ်းစားထားပါသလဲ။
Geng Yi ။ ။ ကျနော်တို့ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့၊ ကျနော်တို့ဟာ CSD လို့ခေါ်တဲ့ Community and Social Development "ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု" အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ ဒီ အဖွဲ့မှာ အဖွဲ့ဝင် (၂၉) ယောက် ပါရှိပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်စီဟာ သူတို့ရဲ့ ကျေးရွာတစ်ရွာစီကနေ လာ ကြတာပါ။ သူတို့ကို သူတို့ရွာကပဲ ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ CSD အဖွဲ့ဟာ ကျနော်တို့ ကုမ္ပဏီအတွက်တော့ အားကိုးအားထားမဏ္ဍိုင်ပါ။ ဒီအဖွဲ့ဟာ ကျနော်တို့နဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ ဒေသခံလူထု အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ ဆက်သွယ်ရေး ပေါင်းကူးတံတားပါပဲ။ တစ်ဆက်ထဲမှာပဲ၊ ကျနော်တို့ဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက် ပါတနာတွေ၊ ကျနော်တို့ရဲ့ ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေအပြင် တခြားသော NGO အဖွဲ့တချို့တွေကိုတောင်မှ၊ ကျနော်တို့နဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေ လုပ်ကြတော့မှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် အခြေခံအားဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးပေါင်းကူး တံတားအနေနဲ့ ကျနော်တို့မှာ၊ CSD အဖွဲ့ ရှိနေပါတယ်။ ဒီ့အတွက်ကြောင့်လည်း ကျနော်တို့ဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက် ပါတနာတွေ၊ ကျနော်တို့ရဲ့ ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေ၊ NGO အဖွဲ့တွေနဲ့ ပိုလို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ အတူတကွလက်တွဲ လုပ်ကိုင်သွားကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ဒါဆိုရင်၊ ကျနော်ဆိုလိုတာက၊ ရွာသူရွာသား အမျိုးသားဖြစ်စေ အမျိုးသမီးဖြစ်စေ၊ တစ်ယောက်ယောက်ဟာ တစ်စုံတစ်ရာကို တိုင်ချင်တန်းချင်လို့ရှိရင်၊ ခင်ဗျားတို့ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်လာပြီး ခင်ဗျားတို့တံခါးကို ခေါက်လို့မရဘူးပေါ့။ ပထမ သူတို့ဟာ CSD အဖွဲ့နဲ့ အရင် တွေ့ကြရမယ်ပေါ့။ CSD အဖွဲ့ဆို တာ ရွာသူကြီးဖြစ်စေ ကျေးရွာအာဏာပိုင်တွေ ဖြစ်စေ၊ သူတို့နဲ့ ခင်ဗျားတို့နဲ့ကြား ခင်ဗျားတို့မှာရှိနေတဲ့ ဆက် သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတမျိုးပေါ့။ သာမန်လူတစ်ယောက်က ခင်ဗျားတို့ကို တစ်ခုခုတိုင်ချင်တန်းချင် တယ်ဆို ရင် ဒီအတွက် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကို ခင်ဗျားတို့က ဘယ်လို ဖန်တီးမှာပါလဲ?
Geng Yi ။ ။ (ခင်ဗျားပြောချင်တာ) ကျနော်နားလည်ပါတယ်။ CSD အဖွဲ့ဝင်ဆိုတာ သူတို့ရဲ့ရွာအတွက် ကော ကျနော်တို့ ကုမ္ပဏီအတွက်ကော အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ ဆက်ဆံရေးအရာရှိလိုမျိုးပါ။ ကုမ္ပဏီနဲ့ ဒေသခံ တွေကြားမှာ တစ်ဘက်နဲ့တစ်ဘက် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေ ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ ထိထိရောက်ရောက်ရှိရေးကို သဘောပေါက်နားလည်သူတွေပါ။ ကျနော်တို့ ဘာတွေ လုပ်ဦးမလဲဆိုရင်၊ နိုင်ငံတကာမှာ လုပ်လေ့လုပ်ထ ရှိတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့က တိုင်ကြားရေးဌာန တစ်ခု တည်ထောင်ပါမယ်။ မကြာခင် သိပ်ကို မကြာခင်မှာ ရွာတိုင်းရွာတိုင်းမှာ အကြံပေးစာပုံးတွေ ထားပါမယ်။ ဒီတိုင်ကြားရေးဌာနမှာ တိုင်စာတွေကို လက်ခံယုံမက၊ အကြံပေးစာပုံးလည်း ထားပါမယ်။ ကျနော်တို့ဟာ ကျနော်တို့နဲ့ ကျေးရွာတွေနဲ့ ပုံမှန်စည်းဝေးဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်ပါမယ်။ လစဉ်ဖြစ်စေ၊ တစ်လခြား ဖြစ်စေ ဒီဆွေးနွေးပွဲကို လုပ်ပါမယ်။ ဒါဟာ တစ်စုံတစ်ဦးကိုပဲ ဖြေရှင်းပေးတာမျိုးမဟုတ်တဲ့ လူအများတက်ရောက်ကြမယ့် စည်းဝေးဆွေးနွေးပွဲပါ။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ ခင်ဗျားဆိုလိုတာက ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ပွဲ (ဒါဘာ) ပွဲလိုမျိုးလား။ ခင်ဗျားတို့က စားပွဲတစ်လုံးနဲ့ ထိုင်နေကြမယ်၊ ရွာသားတွေက ကြမ်းပေါ်မှာ ထိုင်နေကြမယ်။ သူတို့က လက်တွေထောင်ပြီး ကျနော်တို့ ကျမတို့ တစ်ခုပြောချင်ပါတယ် ဆိုပြီး ထပြောကြမယ်။ ဒါမျိုးလား။
Geng Yi ။ ။ ဟုတ်တယ်၊ အဲဒါမျိုးပါ။ တချို့က အဲဒါကို အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲလို့ ခေါ်တယ်။ ဒါဟာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲလိုပါပဲ။ ဒါဟာ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ ဆွေးနွေးပါပဲ။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့မှာ ထိတွေ့ဆက် ဆံရေးအတွက် ကိရိယာတန်ဆာပလာတွေ ရှိနေပါပြီ။ ဒါဟာ နှစ်ဘက်လုံးအတွက် ကျနော်တို့ရဲ့ ထိရောက်တဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံရေး ကိရိယာတန်ဆာပလာတွေပါ။
ဦးရော်နီညိမ်း ။ ။ နောက်တစ်ခုက (စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး) ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာမှာ ဆိုထားတာက၊ ဒီ ကြေးနီ စီမံကိန်းကြီးတစ်ခုလုံးကို ၁၉၉၆ ခုနှစ် တုံးက သြစတြေလျက အတိုင်ပင်ခံ ကုမ္ပဏီကြီး Coffee and Partners က၊ (စီမံကိန်းအတွက်) ပဏာမ ဖြစ်နိုင်ခြေ အစီရင်ခံစာ (pre-feasibility report) ရေးခဲ့ပြီးတော့၊ အဲဒီမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေးအတွက် ကိစ္စရပ်တွေကို ဖေါ်ပြခဲ့တယ်၊ ဆိုတာပါ။ အခု နှစ်ပေါင်း (၂ဝ) နီး ပါး ရှိလာပြီဆိုတော့၊ Coffee and Partners ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တွေ့ရှိချက်တွေဟာ၊ ဒီကနေ့ ပြောင်းလဲနေလောက်ပြီ ဖြစ်တာကြောင့်၊ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီက ထပ်လေ့လာဖို့လိုတယ်၊ ထပ်ပြီး နိုင်ငံတကာစံတွေနဲ့အညီ ပြန်ပြီး မွမ်းမံဖို့လိုတယ်လို့၊ (စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး) ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာမှာ အကြံပြုထားတယ်။ ဒီအတွက် ခင်ဗျားတို့ ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလား။ ပြီးတော့လည်း ၁၉၈၈-၈၉ လောက်က စခဲ့တဲ့၊ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ နောက်ပိုင်း မြန်မာပြည်ထဲမှာ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လုပ်ကိုင်ကြတဲ့ တရုတ်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ခံစားချက်ရှိနေတာကို ကျနော် အခု သတိထားမိပါတယ်။ အဲဒါက တော့ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဟာ မြန်မာပြည်ထဲ စီးပွားရေးလာပြီးလုပ်ရင် ဘာမှ ချန်မသွားဘူး၊ အကုန်လုံးကို အရယူသိမ်းပိုက်သွားကြတာပဲလို့၊ ပြည်သူလူထုက ခံစားနေရတာကို ကျနော်တို့ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကလည်း တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ အဆင့်အမျိုးမျိုးရှိတာကို ကျနော် သတိထားမိပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံထဲက ဒေသခံ အဆင့်၊ ခရိုင်အဆင့်၊ ပြည်နယ်အဆင့်၊ နောက်တစ်ခါ နိုင်ငံတော်အဆင့်၊ နောက်ပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်ဆိုပြီး အဲဒီလို ကုမ္ပဏီတွေ အဆင့်အမျိုးမျိုးနဲ့ တရုတ်ပြည်ထဲ ရှိကြတဲ့အထဲမှာ၊ မြန်မာပြည်ထဲကို လာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ကြတာဟာ ဘယ်လိုအဆင့်ရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်။ ဝမ်ပေါင်ဟာ နိုင်ငံတကာအဆင့်ရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်၊ အခု မြန်မာပြည်သူတွေ ခံစားနေကြရတာမျိုး မဟုတ်ဘူးဆို တာကို ပြသဖို့၊ ခင်ဗျားတို့ ပြင်ဆင်လုပ်ကိုင်ထား ပြီးပါပြီလား။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာ အခြေစိုက်ထားတဲ့ ကြေးစင်တောင်၊ စံပယ်တောင်၊ စံပယ်တောင် (တောင်ပိုင်း) နဲ့ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း လေးခုကို၊ "မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင် လီမိတက်" Myanmar Economics Holding Ltd. (MEHL) နဲ့ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်နေပြီး တရုတ်နိုင်ငံက လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ ကုမ္ပဏီကတော့ "မြန်မာ ၀မ်ပေါင် ကြေးနီသတ္ထုတူးဖေါ်ရေး လီမိတက်" Myanmar Wanbao Mining Copper Ltd. (MWMCL) ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ (၄)ရက်နေ့က၊ ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီရဲ့ ဖိတ်ခေါ်ချက်နဲ့ ဒီ ကြေးနီစီမံကိန်း လေးခုထဲက အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ လက်ပံတောင်းတောင်က ကြေးနီသတ္ထုတူး ဖေါ်ရေးနယ်မြေရုံးမှာ ဗီအိုအေ၀ိုင်းတော်သား ဦးရော်နီညိမ်းက သွားရောက်ပြီး ဦးဆောင်ညွှန်ရေးမှူး Mr. Geng Yi ကို သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဒီအစီရင်ခံစာအတိုင်း အကောင်အထည်ဖေါ်ရေး အစိုးရဖွဲ့စည်းပေး တဲ့ ကော်မတီတစ်ရပ်လည်း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ "မြန်မာ ၀မ်ပေါင် ကြေးနီသတ္ထုတူးဖေါ် ရေး လီမိတက်"ရဲ့ ရှေ့ဆက် ဆောင်ရွက်မယ့် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ Mr. Geng Yi နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း (အပိုင်း - ၂) ကို၊ ဒီသီတင်းပတ်ရဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးရာကဏ္ဍကနေ ထုတ်လွှင့်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ရော်နီညိမ်း။ ။ နောက်တစ်ခုက (စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး)ကော်မရှင်အစီရင်ခံစာမှာ ဆိုထားတာက၊ ဒီ ကြေးနီ စီမံ ကိန်းကြီးတစ်ခုလုံးကို ၁၉၉၆ ခုနှစ် တုံးက သြစတြေလျက အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီကြီး Coffey and Partners Pty Ltd. က၊ (စီမံကိန်းအတွက်) ပဏာမဖြစ်နိုင်ခြေအစီရင်ခံစာ (pre-feasibility report) ရေးခဲ့ပြီးတော့၊ အဲဒီမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအတွက် ကိစ္စရပ်တွေကို ဖေါ်ပြခဲ့တယ်၊ ဆိုတာပါ။ အခု နှစ်ပေါင်း (၂၀)နီး ပါး ရှိလာပြီဆိုတော့၊ Coffey and Partners ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တွေ့ရှိချက်တွေဟာ၊ ဒီကနေ့ ပြောင်းလဲနေလောက်ပြီ ဖြစ်တာကြောင့်၊ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီက ထပ်လေ့လာဖို့လိုတယ်၊ ထပ်ပြီး နိုင်ငံတကာစံ တွေနဲ့ အညီ ပြန်ပြီး မွမ်းမံဖို့လိုတယ်လို့၊ (စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး)ကော်မရှင်အစီရင်ခံစာမှာ အကြံပြုထားတယ်။ ဒီအတွက် ခင်ဗျားတို့ ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလား။ ပြီးတော့လည်း ၁၉၈၈-၈၉ လောက်က စခဲ့တဲ့၊ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ နောက်ပိုင်း မြန်မာပြည်ထဲမှာ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ် ကိုင်ကြတဲ့ တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ခံစားချက်ရှိနေတာကို ကျနော် အခု သတိထားမိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဟာ မြန်မာပြည်ထဲ စီးပွားရေးလာပြီးလုပ်ရင် ဘာမှ ချန်မသွားဘူး၊ အကုန်လုံးကို အရယူသိမ်းပိုက်သွားကြတာပဲလို့၊ ပြည်သူလူထုက ခံစားနေရတာကို ကျနော်တို့ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကလည်း တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ အဆင့်အမျိုးမျိုးရှိတာကို ကျနော် သတိထားမိပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံထဲက ဒေသခံအဆင့်၊ ခရိုင်အဆင့်၊ ပြည်နယ်အဆင့်၊ နောက်တစ်ခါ နိုင်ငံတော်အဆင့်၊ နောက်ပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်ဆိုပြီး အဲဒီလို ကုမ္ပဏီတွေ အဆင့်အမျိုးမျိုးနဲ့ တရုတ်ပြည်ထဲ ရှိကြတဲ့အထဲမှာ၊ မြန်မာပြည် ထဲကို လာပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတာဟာ ဘယ်လိုအဆင့်ရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်။ ၀မ်ပေါင်ဟာ နိုင်ငံတကာ အဆင့်ရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်၊ အခု မြန်မာပြည်သူတွေ ခံစားနေ ကြရတာမျိုး မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ပြသဖို့၊ ခင်ဗျားတို့ ပြင်ဆင်လုပ်ကိုင်ထားပြီးပါပြီလား။
Geng Yi ။ ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးကိစ္စရပ်ဟာ၊ အခုလို သတ္ထုတူးဖေါ်ရေးလုပ် ငန်းနယ်ပယ်အတွက်လည်း သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ အခုလို ကမ္ဘာ့အဆင့်သတ္ထုတူးဖေါ်ရေး စီမံကိန်းကြီး မှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု၊ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေထိခိုက်မှုနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲ မှုစနစ် ဆိုတာတွေက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတို့အတွက် သိပ်အ ရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့လည်း ဒီစီမံကိန်းကြီးရဲ့ အစ စောစောပိုင်းမှာ၊ အရင်တုံးက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့တဲ့ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးက၊ နိုင်ငံတကာစံတွေအတိုင်း၊ ပဏာမဖြစ်နိုင်ခြေအစီရင်ခံစာ (pre-feasibility report) / ဖြစ်နိုင်ခြေ အစီရင်ခံစာ(feasibility report) တွေကို ကျကျနနလုပ်ခဲ့သလို၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေအတွက် ချင့်ချိန်တွက်ဆမှု (assessment)တွေ လုပ်ကိုင် ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က တည်ရှိနေတဲ့ ဥပဒေတွေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့အညီ အဆင့်မှီမှီနဲ့၊ "ဖြစ်နိုင်ခြေ" အစီရင်ခံစာတွေ ပြီးစီးအောင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ရော်နီညိမ်း ။ ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ"ဖြစ်နိုင်ခြေ" အစီရင်ခံစာတွေက အခုကာလနဲ့ မကိုက်ညီတော့ဘူးလို့ အခု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာက ဆိုတယ် မဟုတ်လား။
Geng Yi ။ ။ အခု ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစီရင်ခံစာရဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို ကျနော်တို့ အပြည့်အ၀ အလေးအနက်ထားပါတယ်။ တခါ "ဖြစ်နိုင်ခြေ"အစီရင်ခံစာတွေ ထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်၊ အခု (၁၅)နှစ်လောက် ကြာလာတဲ့ အခါမှာတော့၊ အထူးသဖြင့် လူမှုအသိုင်းအသိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ကော တရားဥပဒေစနစ်ကော၊ အစိုး ရကော၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကော ပြောင်းလဲကုန်ကြပြီပေါ့။ လူမှုအသိုင်းအသိုင်း ပတ်ဝန်းကျင်နယ်ပယ်ရဲ့ ပြောင်းလဲမှုက သိပ်ကို များပြားပါတယ်။ အကြီးအကျယ်ကို ပြောင်းလဲလာတာပါ။ တခါ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့၊ တကယ့်လက်တွေ့ကျကျ နိုင်ငံတကာအဆင့် သတ်မှတ်ချက်စံတွေကလည်း မြင့် တက်လာနေပါတယ်။ ကျနော်တို့က ဒါတွေကို ခေတ်နဲ့အညီ ပြန်လုပ်ရပါတယ်။ ဒီ "ဖြစ်နိုင်ခြေ" အစီရင်ခံစာ ဟောင်းတွေ အရ သူတို့တုန်းက ဘာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးပြီလဲ၊ ကျနော်တို့က ဘာတွေထပ်လုပ်ကြရမှာလဲ ဆိုတာကို ပြန်သုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် မနှစ်က နိုဝင်ဘာလမှာ ပြဿနာမဖြစ်ခင်ကတည်းက၊ ကျနော်တို့က ၂၀၁၂ ခုနှစရဲ့ နှစ်စကတည်းက ဒီလို ပြန်လှန်သုံးသပ်မှုတွေကို လုပ်ခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ ဒီစီမံကိန်းကြီး အတွက် ချင့်ချိန်တွက်ဆမှုအစီရင်ခံစာ (assessment report) တစ်စောင်အသစ်ပြန်ရေးဆွဲဖို့ ကျနော်တို့ ပြင် ဆင်ခဲ့ကြ ပြီးပါပြီ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သတ္ထုတူးဖေါ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ သိပ်ကိုရှေ့တန်းရောက်နေကြတဲ့ အနောက် နိုင်ငံတွေက နာမည်ကြီး အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီကြီးတွေ (consultant firms) တွေကို ကျနော်တို့က တင်ဒါစနစ်နဲ့ ခေါ်ယူ ယှဉ်ပြိုင်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒီ ချင့်ချိန်တွက်ဆမှုအစီရင်ခံစာ (assessment report) အသစ်ရေးဆွဲဖို့ နောက် ဆုံးမှာ၊ Australia နိုင်ငံကပဲ Knight Piesold Limited (နိုက်ပီဆိုးလ် လီမိတက်) အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီကြီးက တင်ဒါမှာ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ အခု သူတို့နဲ့ ကျနော်တို့နဲ့ စာချုပ်ချုပ်ပြီးပါပြီ။ ဒီနှစ် မတ်လ စောစောပိုင်းအထိ၊ စာ ချုပ်ပါအတိုင်း ဒီ assessment report ရဲ့ အဆင့်(၁)(Phase One)ကို ရေးဆွဲပြီးစီးသွားခဲ့ပါပြီ။ ဒီ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို၊ ပြန်ပြီးသုံးသပ်မှုနဲ့ ပြန်ပြီးမွမ်းမံမှုအစီ အစဉ် (updating and reviewing program) အတွက် လေ့လာရမယ့် "နယ်ပယ်သတ်မှတ်မှု" (scoping) နဲ့ အခေါ်အဝေါ် အသုံးအနှုံး(terms)တွေ ပြုစုမှုတွေ ပြီးစီးသွားခဲ့ပါပြီ။ ကျနော်တို့ဟာ Knight Piesold (နိုက်ပီဆိုးလ်) အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီကြီးဆီကနေ၊ သုံးသပ်ချက်တွေ တွေးဆချက်တွေ အကြံပြုချက်တွေကို ရခဲ့ပါပြီ။ အခု ကျနော်တို့ က နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းတွေအရ၊ လိုအပ်ချက်တွေအတိုင်း ပြည့်မှီစေဖို့၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။ အဲဒါကလည်း အကြောင်းတစ်ခုက ရှိနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာက သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတို့အတွက်၊ အထူးသဖြင့် တရားဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာမှာ သိပ်ပြီး မဖွံ့ဖြိုးသေးသလို၊ အသေးစိပ်သတ်မှတ်ဖေါ်ပြချက်တွေ သိပ်မရှိသေးပါ ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့က၊ နိုင်ငံတကာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုပဲ လိုက်ရပါတယ်။ နိုင်ငံတကာရဲ့လုပ်ပုံလုပ် နည်းက အကောင်းဆုံးပဲလို့ အခုအချိန်မှာ ကျနော်တို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ Knight Piesold (နိုက်ပီဆိုးလ်) အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီကြီးက ကျနော်တို့ကို (အမေရိကန်အခြေစိုက် " နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်းကြီး (International Finance Corporation - IFC) သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ့ဘဏ် (World Bank) ရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း တွေနဲ့အညီ၊ လမ်းညွှန်မှု(guidance) တွေ ရေးဆွဲပေးပါတယ်။
ရော်နီညိမ်း ။ ။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဒီစီမံကိန်းအကြောင်း (summary) စာအုပ်ထဲမှာလည်း၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ စံတွေနဲ့အညီ လုပ်နေပါတယ်လို့တော့ ရေးတော့ ရေးထားတာပဲလေ။
Geng Yi ။ ။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့စံတွေ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပုံတွေအတိုင်းပါပဲ။ ကျနော်တို့ရဲ့ "သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုကို သုံးသပ်လေ့လာခြင်း" (Environmental and Social Impact Analysis - ESIA) အစီရင်ခံစာကို ပြန်ပြီးမွမ်းမံတာနဲ့ "သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေး" အစီအစဉ်(Environment Management Plan - EMP) တို့ကို ရေးဆွဲပြီးတာနဲ့၊ ဒါတွေ အပေါ်မူတည်ပြီး ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ ကိုယ်ပိုင် "သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲရေးစနစ်" ကို ကျနော်တို့ စပြီး တည်ဆောက် ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း "သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲခြင်း စနစ်" (Environmental Management System – EMS) တစ်ခုတည်ဆောက်ရာမှာ "နိုင်ငံတကာစံ သတ်မှတ်ခြင်း အဖွဲ့ကြီး" (International Organization of Standardization) က ထုတ်ပေးပြီး ကျနော်တို့ ရရှိထားတဲ့၊ "စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ ကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် မထိခိုက်စေဖို့ စီမံခန့်ခွဲရေး ကျွမ်းကျင်မှု" ISO 14011 လက်မှတ်မှာ သတ်မှတ် ဖေါ်ပြထားတာတွေ အတိုင်း၊ ကျနော်တို့ လုပ်မှာပါ။ ဒါက နေ့စဉ်လုပ်ရမယ့် လုပ်ငန်းအနေနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်တာမှာ ကျနော်တို့ကို ပိုပြီး သဘောပေါက်နားလည်စေပါတယ်။ ဒါဟာ သိပ်ပြီးခိုင်မာတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းစနစ်နဲ့ ကျနော်တို့ကို ချည်နှောင်ထားတာပါ။
ရော်နီညိမ်း ။ ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစီရင်ခံစာ မတိုင်ခင် လုပ်ကြတာမှာလား၊ အစီရင်ခံစာ ထွက် ပြီးမှလား။
Geng Yi ။ ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစီရင်ခံစာ မတိုင်ခင်ကတည်းက ကျနော်တို့က စလုပ်နေခဲ့ တာပါ။
Geng Yi ။ ။ သူတို့ သိပါတယ်။ ကျနော်တို့က အသေးစိပ်တွေနဲ့ကို တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့က စုံစမ်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစီရင်ခံစာ မတိုင်ခင်ထဲက၊ အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ခဲ့တာပါ။ အတိုင်ပင်ခံ ကုမ္ပဏီ အသစ်ငှားဖို့ကိုလည်း၊ ကျနော်တို့က စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစီရင်ခံစာ မတိုင်ခင်ထဲက၊ တင်ဒါခေါ် ပြီး ရွေးခဲ့ တာပါ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ မပေါ်ပေါက်ခင်လေးမှာတင်၊ ဒီ assessment report ရဲ့ အဆင့် (၁) (Phase One) ကို ကျနော်တို့ လုပ်လို့ကိုင်လို့ ပြီးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာလည်း၊ အခု ကျနော်တို့က ဒီ Australiaက အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီ Knight Piesold (နိုက်ပီဆိုးလ်)က ကျနော်တို့ကို ပေးအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို တင်သွင်းခဲ့ပြီးပါပြီ။ နောက်ထပ်အဆင့် အစီအစဉ်ကို၊ လာမယ့် ဇူလိုင်လထဲမှာ တင်သွင်းပြီး ရင် ကျနော်တို့ရဲ့ မွမ်းမံပြင်ဆင်မှုတွေ ပြီးသွားပါပြီ။ အများပြည်သူကို ချပြ အကြာံဏ်ရယူဖို့နဲ့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ အတည်ပြုချက်ရဖို့တို့အတွက် ကျနော်တို့က ဒါတွေကို ထုတ်ပြန်သွားမှာပါ။ အဲဒီမှာ လက်ရှိ နိုင်ငံတကာစံတွေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအရ၊ အသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲထားတဲ့ "သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လူမှုပတ် ၀န်းကျင်ထိခိုက်မှု ကို သုံးသပ်လေ့လခြင်း" (Environmental and Social Impact Analysis - ESIA) အစီရင်ခံစာ အသစ် ထွက်လာပြီပေါ့ဗျာ။
ရော်နီညိမ်း ။ ။ အခု ကျနော်တို့ပြောနေတာက စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစီရင်ခံစာကို မူတည်ပြီး ပြော နေကြတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီအစီရင်ခံစာထွက်ပြီးတဲ့နောက်၊ အစိုးရက စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစီရင်ခံစာပါ အကြံ ပြုချက်တွေအတိုင်း "အကောင်အထည် ဖေါ်ရေးကော်မီတီ" (Implementation Committee)တစ်ရပ်ကို ဖွဲ့ စည်းခဲ့တယ် မဟုတ်လား။ ကျနော်တို့ သတိထားမိတာက၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစီရင်ခံစာထွက်ပြီး ရက် ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ၊ ဒီကော်မီတီဝင်တွေ ဒီကြေးနီစီမံကိန်းရှိရာဒေသကို သွားပြီးတော့ အစီရင်ခံစာမှာ အကြံပြု ထားတဲ့အတိုင်း၊ ဒေသခံတွေကို လျော်ကြေးတွေ တိုးပြီးပေးတာကို သွားလုပ်ကြတယ်။ ဒါက ခင်ဗျားတို့ ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီက တိုးပေးတဲ့ လျော်ကြေးတွေ။ အဲဒါပြီးတော့၊ သူတို့ ဘာတွေလုပ်ကြလဲ၊ ခင်ဗျားတို့နဲ့ ဘယ် လို ဆက်ပြီး ထိတွေ့ကြသလဲ။ အခု ခင်ဗျားတို့နဲ့ ဒီအကြံပြုချက်တွေအတိုင်း အကောင်အထည်ဖေါ်ရေးကော်မီ တီက ဘာတွေလုပ်ကိုင်နေကြသလဲ နည်းနည်း ရှင်းပြပေးပါလား။
မြန်မာ ဝမ်ပေါင် ကုမ္မဏီတာဝန်ခံ ဖြေရှင်းချက် (အပိုင်း - ၃)
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာ အခြေစိုက်ထားတဲ့ ကြေးစင်တောင်၊ စံပယ်တောင်၊ စံပယ် တောင် (တောင်ပိုင်း) နဲ့ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း လေးခုကို၊ "မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင် လီမိတက်" Myanmar Economics Holding Ltd. (MEHL) နဲ့ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်နေပြီး တရုတ်နိုင်ငံက လာရောက်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံတဲ့ ကုမ္ပဏီကတော့ "မြန်မာ ဝမ်ပေါင် ကြေးနီသတ္ထုတူးဖေါ်ရေး လီမိတက်" Myanmar Wanbao Mining Copper Ltd. (MWMCL) ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ (၄)ရက်နေ့က၊ ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီရဲ့ ဖိတ်ခေါ် ချက်နဲ့ ဒီ ကြေးနီစီမံကိန်း လေးခုထဲက အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ လက်ပံတောင်းတောင်က ကြေးနီသတ္ထုတူးဖေါ်ရေး နယ်မြေရုံးမှာ ဗီအိုအေဝိုင်းတော်သား ဦးရော်နီညိမ်းက သွားရောက်ပြီး ဦးဆောင်ညွှန်ရေးမှူး Mr. Geng Yi ကို သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဒီအစီရင်ခံစာအတိုင်း အကောင်အထည်ဖေါ်ရေး အစိုးရဖွဲ့စည်းပေးတဲ့ ကော်မီတီ တစ်ရပ်လည်း ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ "မြန်မာ ဝမ်ပေါင် ကြေးနီသတ္ထုတူးဖေါ်ရေး လီမိ တက်ရဲ့ ရှေ့ဆက် ဆောင်ရွက်မယ့် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ Mr. Geng Yi နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်း ခန်း (အပိုင်း - ၃) ကို၊ ဒီ သီတင်းပတ်ရဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးရာကဏ္ဍကနေ ဆက်လက်ထုတ်လွှင့် ပေးလိုက် ပါတယ်။
ရော်နီညိမ်း ။ ။ အခု ကျနော်တို့ပြောနေတာက စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစီရင်ခံစာကို မူတည်ပြီး ပြောနေကြ တာ ဖြစ်တယ်။ ဒီအစီရင်ခံစာထွက်ပြီးတဲ့နောက်၊ အစိုးရက စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက် တွေအတိုင်း အကောင်အထည်ဖေါ်ရေးကော်မီတီတစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ် မဟုတ်လား။ ကျနော်တို့ သတိ ထားမိတာက၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစီရင်ခံစာထွက်ပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ၊ ဒီကော်မီတီဝင်တွေ ဒီကြေး နီစီမံကိန်းရှိရာဒေသကို သွားပြီးတော့ အစီရင်ခံစာမှာ အကြံပြုထားတဲ့ အတိုင်း၊ ဒေသခံတွေကို လျော်ကြေး တွေ တိုးပြီးပေးတာကို သွားလုပ်ကြတယ်။ ဒါက ခင်ဗျားတို့ ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီက ပေးတဲ့ဟာတွေ။ အဲဒါပြီးတော့၊ သူတို့ ဘာတွေလုပ်ကြလဲ၊ ခင်ဗျားတို့နဲ့ ဘယ်လို ဆက်ပြီး ထိတွေ့ကြသလဲ။ အခု ခင်ဗျားတို့နဲ့ ဒီ အကြံပြုချက် တွေအတိုင်း အကောင်အထည်ဖေါ်ရေးကော်မီတီက ဘာတွေလုပ်ကိုင်နေကြသလဲ နည်းနည်း ရှင်းပြပေးပါ လား။
Geng Yi ။ ။ အလုပ်သဘောအကြောင်းတစ်ချက်အနေနဲ့ ကျနော်ဟာ ဒီ အကောင်အထည်ဖေါ်ရေး ကော် မီတီရဲ့ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးပါ။ ဒါဟ ကျနော့်အတွက် ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်သလို၊ ဖိအားတစ်ရပ်လည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါဟာ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ပါဝင် အလုပ်အကျွေးပြုမှုတစ်ခု ဖြစ်သလို၊ ကျနော့်ကုမ္ပဏီကိုလည်း၊ ကျနော်က ကိုယ် စားပြုနေပြန်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီဟာ တာဝန်သိ သတ္ထုတူးဖေါ်ရေုးမ္ပဏီပါ။ ကျနော်တို့ဟာ (စုံစမ်းရေးကော်မ ရှင်ရဲ့) အကြံပေးချက်တွေကို အပြည့်အ၀လေးစားသလို၊ ကျနော်တို့ဟာ တိုးတက်မှုရှိရေး ဖြစ်လာရမယ့် တာ ၀န်တစ်ရပ်ကို ကျေပြွန်ရစေအောင်၊ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဒီ အကောင်အထည်ဖေါ်ရေး ကော်မီ တီဆိုတာ (မြန်မာ)အစိုးရနဲ့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကို ကိုယ်စားပြုနေသလို၊ တိုးတက်မှုရရှိရေး တာဝန်ကွေထမ်း ဆောင်နေကြတာမှာ ပံ့ပိုးမှုတွေပေးရမှာ ဖြစ်သလို ကြီးကြပ်ရမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဒီအကောင်အထည် ဖေါ်ရေးကော်မီတီမှာ အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးတွေ ပါတယ်၊ နယ်ပယ်အသီးသီးက ကျွမ်းကျင်သူတွေ ပါတယ်။ သူတို့ က ကျနော်တို့ကို ကူညီလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်၊ ပြီးတာ့လည်း တိုးတက်မှုရှိလာရမယ့် တာဝန်တွေ အားလုံးအတွက်လည်း ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။
ရော်နီညိမ်း ။ ။ ခင်ဗျားတို့တွေ ပုံမှန်ထိတွေ့မှု ရှိနေကြတယ်လို့ ဆိုလိုတာလား။
Geng Yi ။ ။ သိပ်ကို မကြာခဏ တွေ့ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းမှာ ကျနော်တို့တွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ် ယောက် ။ သိပ်ကို နီးနီးကပ်ကပ်နဲ့ အလုပ်အတူတူလုပ်နေကြပါတယ် ဗျာ။
ရော်နီညိမ်း ။ ။ ကျနော်ဆိုလိုတာက ခင်ဗျားတို့တွေ ပုံမှန် အချိန်ဇယားနဲ့ တစ်ပတ်ကို တစ်ခါ (သို့မဟုတ်) တစ်ပတ်ကို နှစ်ခါမျိုး၊ ဒီအကောင်အထည် ဖေါ်ရေးကော်မီတီနဲ့ ဘယ်လိုထိတွေ့နေကြသလဲ ဆိုတာပါ။
Geng Yi ။ ။ ပုံမှန်အနေနဲ့ အပတ်တိုင်းမှာ အစည်းအဝေး ရှိပါတယ်။ တိုးတက်မှုရရှိရေး တာဝန်ထမ်း ဆောင်မှုတွေ / လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အလုပ်တွေရဲ့ တိုးတက်မှုတွေကို စောင့်ကြည့်မှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေး ကြတဲ့ အပတ်စဉ် အစည်းအဝေး ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ကော်မီတီဝင်တွေ နေပြည်တော်မှာ ထိုင်နေကြမယ့် အစား၊ အပတ်စဉ် ကျနော်တို့ရဲ့ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီသတ္ထုတူးဖေါ်ရေးနယ်မြေကို လာဖို့ကြိုးစားကြ ပါတယ်။ လာနိုင်တဲ့ကော်မီတီဝင်တွေ အပတ်စဉ် လာကြပါတယ်။ ဒီမှာ ကျနော်တို့ ကုမ္ပဏီက တင်ပြမှုတွေ အပါအ၀င်၊ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့ အကြံပေးချက်တွေကို ဆောင်ရွက်တာမှာ တစ်ချက်ချင်း အချိန်တိုင်းမှာ တိုးတက်မှုတွေ၊ အခက်အခဲတွေကို ဆွေးနွေးကြသလို၊ အကောင်အထည်ဖေါ်ရေးကော်မီတီရဲ့ လမ်းညွှန်မှု တွေ ပံ့ပိုးမှုတွေကိုလည်း ကျနော်တို့ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ရော်နီညိမ်း ။ ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဒီကော်မတီကို ဘယ်သူဦးဆောင်ပြီး လာပါသလဲ။ ဘယ်သူတွေလာပါသလဲ။
Geng Yi ။ ။ ကော်မီတီဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ကို လာနေပါတယ် ခင်ဗျ။
ရော်နီညိမ်း ။ ။ ဘယ်သူပါလဲခင်ဗျ။
Geng Yi ။ ။ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးလှထွန်း ပါ။
ရော်နီညိမ်း ။ ။ အမှတ် (၅) သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးလှထွန်း ပေ့ါ။
Geng Yi ။ ။ သူဟာ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့ အကြံပေးချက်တွေကို အကောင်အထည်ဖေါ်ရေးကော်မီတီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌပါ။ အလုပ်တွေ သိပ်များကြပေမယ့်၊ ဒီကော်မတီအဖွဲ့ဝင် တခြားဝန်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ သတ္ထုတွင်းဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်အောင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ သစ်တောဝန်ကြီး ဦးဝင်းထွန်း၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကိုတို့နဲ့ သာသနာရေး၊ လယ်ယာ/ဆည်မြောင်း တို့က ဒုဝန်ကြီးတွေလည်း လာကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ ပင်မတာဝန်တွေနဲ့ အလုပ်များနေကြပေမယ့်၊ ဒီ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့ အကြံပေးချက် တွေ ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ရေး စီမံချက်အပေါ်မှာ စံပြနမူနာတစ်ခု အဖြစ်သဘောထားပြီးတော့ တခြားလုပ်ငန်း တွေထက် ဦးစားပေးပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ ဒါဟာ ကျနော်တို့ကို သိပ်ကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။
ရော်နီညိမ်း ။ ။ ဒါပေမဲ့၊ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်က၊ နောက်ဆုံး ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာ တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ ခင်ဗျား တို့က ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေကြတယ် ဆိုပေမယ့်၊ ဒေသခံ ရွာသားတချို့ကို တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ တစ်ချို့က ဦးဆောင်ပြီးတော့ ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်မှု ရှိနေပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ကြေးနီစီမံကိန်းအတွက် ဒေသခံတွေ ဆီက သိမ်းထားတဲ့မြေပေါ်မှာ၊ ဒေသခံ ရွာသားတချို့ ထွန်ယက်မှုတွေ ၀င်လုပ်ကြပြီးတော့၊ သူတို့ရဲ့ ဆန္ဒကို ဖေါ်ထုတ်ကြတယ်။ ခင်ဗျား တို့က ဘယ်လောက်ပဲ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတွေလုပ်ပေးပေမဲ့၊ သူတို့က ခင်ဗျားတိုရဲ့ ကြေးနီစီမံကိန်းကို လုံးဝရပ်စေချင်တယ်၊ ဒီမြေပေါ်မှာ မိရိုးဖလာအတိုင်း စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ချင်ကြတယ်။ အခု သူတို့ဟာ ခင်ဗျားတို့ ကြေးနီစီမံကိန်းမြေထဲကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာကြတယ်ဆိုပြီး သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင် တချို့ကို ထိန်းသိမ်းထားလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့ အကြံပေးချက်တွေကို အကောင်အ ထည် ဖေါ်ရေး ခင်ဗျားတို့က အပြင်းအထန် အလုပ်လုပ်နေကြပေမယ့်၊ ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာအတွက် ခင်ဗျားရဲ့ အမြင် သဘောထားက ဘယ်လိုရှိလဲ၊ ဘာကြောင့် ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေရတာလဲ။ ကျနော် ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ် ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားရဲ့ အမြင်သဘောထားကို သိချင်တာ သက်သက်ပါ။ ဘာကြောင့် ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေရတာပါလဲ ခင်ဗျ။
Geng Yi ။ ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီက စပြီးပြောချင်တာက၊ ဘယ်လို အကြမ်းဘက်မှုမျိုး အတွက်မဆို ကျနော်တို့က အမြဲတမ်းပဲ ၀မ်းနည်းစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ၊ ကျနော့်တို့ အတွက် တစ်ဘက်ဘက်ကို အပြစ်တင်ဖို့၊ သိပ်ကို ခက်ခဲပါတယ်။ ဒီကြေးနီစီမံကိန်းဒေသမှာ ထိခိုက်အနာတရ တွေဖြစ်နေသမျှ ကျနော်တို့က စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ ဂုဏ်ဆောင် အမျိုး သမီးကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောထားတာ ရှိပါတယ်။ မတူကွဲပြားခြားနားကြတဲ့ ဘယ်လိုအယူအဆ ကို မဆို၊ ဘယ်လိုအငြင်းပွားမှုကို မဆို၊ ဘယ်လို နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းတွေကို မဆို၊ ခင်မင်ရင်းနှီးစွာနဲ့ ဆွေး နွေးညှိနှိုင်းယူနိုင်ရမယ် ဆိုတာပါ။ ဒီနည်းလမ်းက ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု မရှိပဲ ဆန္ဒပြနေတာတွေထက် အများကြီး ပိုကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းပါ။ ခင်ဗျားပြောတဲ့ အဖမ်းအဆီးကိစ္စမှာ၊ ကျနော်တို့ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း မရှိပါဘူး။ သတင်းစာဖတ်ရလို့ တချို့သောအချက်အလက်တွေ သိထားတာပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေရတဲ့အပေါ်မှာ၊ ကျနော် နားလည်သဘောပေါက်နေတာကတော့၊ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု မရှိသေးတာပါပဲ။ ကျနော်တို့ ဘာလုပ် သင့်သလဲဆိုတော့၊ ကျနော်တို့ ကုမ္ပဏီဘက်ကနေ၊ ဆက်ဆံရေးကို စတင်ဖို့ပါပဲ။ မြန်မာအစိုးရကကော ကျနော်တို့ရဲ့ ပါတနာ ဦးပိုင်လိမိတက်ကကော၊ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေတယ်လို့လည်း ကျနော် ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီကြေးနီစီမံကိန်းအပေါ်မှာ ကျနော်တို့နဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့အမြင်ရှိသူ ဒေသခံတွေရဲ့ အဖွဲ့ဟာ၊ သိပ်မကြီးမားဘူး လို့ ကျနော်ယုံကြည်နေပြီးတော့၊ သူတို့နဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံသွားဖို့ ကျနော် အပြင်းအထန်ကြိုးစား လုပ်ကိုင်သွား မှာပါ။ သူတို့ရဲ့ လိုလားချက်တွေကို ကျနော်တို့ နားလည်နိုင်ပါတယ်၊ သူတို့ရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို ကျနော်တို့ နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့၊ ကျနော်ဟာ တရုတ်လူလတ်တန်းစား မိသားစုကနေ ပေါက်ဖွား ကြီးပြင်းခဲ့တာပါ။ အခု ကျနော်ဟာ (၃၇)နှစ် ရှိပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၃၀)၊ ကျနော် (၆)နှစ် /(၇)နှစ်သား အရွယ် ပထမတန်းကျောင်းသားဘ၀တုံးက၊ တရုတ်ပြည် အနောက်တောင်ပိုင်းက ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကွေ့ဂျိုးပြည်နယ် (Guizhou Province) ထဲက၊ တောရွာလေးတစ်ရွာမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်။ ကွေ့ဂျိုးပြည်နယ် ဟာ အခုလည်းပဲ တရုတ်ပြည်ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနည်းဆုံးနဲ့ အဆင်းရဲဆုံး ပြည်နယ်တစ်ခု ဖြစ်နေတုံးပါ။ ခင်ဗျား မှန်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် (၃၀)က၊ ကျနော်တို့ဟာ ကြမ်းတမ်းခက်ခဲတဲ့ဘသတွေကို ဖြတ် သန်းခဲ့ကြရပါတယ်။ ကျနော့်မိဘတွေက အဲဒီတုံးက စက်ရုံတစ်ရုံမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတာကို ကျနော် သေချာ မှတ်မိနေပါတယ်။ စက်ရုံကအားလုံးသော မိသားစုတွေဟာ ကြက်သားဟင်းတစ်ခွက်ကို ဝေမျှစားကြရပါတယ်။ စားပွဲပေါ်မှာ ဒီတစ်နပ်အတွက် ဟင်းတစ်ခွက်ကို တွေ့ရပြီးတဲ့နောက်၊ နောက်တစ်နပ်ကို ဘယ်လိုလုပ် စားကြ ရမယ်ဆိုတာကို၊ ကျနော်တို့ မသိကြပါဘူး။ ထမင်း နောက်တစ်နပ်အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်နေကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုအခါ ဒီမှာ၊ ဒီကြေးနီစီမံကိန်းကြောင့်၊ လူထုတွေက သူတို့ရဲ့ အနာဂတ်နေ့စဉ်ဘ၀တွေအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာကို ကျနော် နားလည်သဘောပေါက်ပါတယ်။ ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ မြို့ပြစီမံကိန်းတို့ စက်မှုစီမံ ကိန်းတို့ကို အေ့ာင်အထည်ဖေါ်ကြတဲ့နေရာမှာ၊ တချို့သော စီမံကိန်းတွေဟာ ဒေသခံလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေကို ထိခိုက်နစ်နာစေပါတယ်။ ရေတိုမှာ ဒီထိခိုကနစ်နာမှုတေါကြောင့် ဒေသခံလူထုတွေရဲ့ လူနေမှုဘ၀ပုံစံတွေ ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်ကြတဲ့နေရာမှာ ပိုပြီးကောင်းလာလေမလား၊ အဆိုးဆုံးတွေ ဖြစ်လာလေမလားလို့ သာမန်လူထုတွေကို စိုးရိမ်ပူပန်နေကြမှာကို ကျနော် နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက် ဖြတ်သန်းကြရမယ့် အချိန်ကာလ လိုအပ်တယ်လို့၊ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း (၃၀)ကြာလာပြီးတဲ့အခါမှာ၊ ကျနော်ဟာ လူကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ အဲဒီအချိန်တွေမှာ တရုတ်ပြည်ဟာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနေတာ ကြောင့်၊ ကျနော့်အတွက် ပညာရေးအခွင့်အလမ်းတွေ ပိုပြီး ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်ဟာ အလုပ်အကိုင်အ ခွင့် အလမ်းတွေ ပိုပြီး ရရှိခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်ဟာ တံခါးကို စပြီးဖွင့်လိုက်တာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်(၃၀)ကပါ။ အဲဒီကစလို့၊ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၃၀)က စလို့၊ တရုတ်ပြည်ဟာ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း (၃၀)ကြာလာပြီးတဲ့နောက်၊ နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေ လုပ်ဆောင်နေစဉ်က ခုလိုပဲ တတွဲထဲ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေ / စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ အတော်များများကို ဖြေရှင်းပြေလည်သွားစေခဲ့ပါပြီ။ မြန်မာ နိုင်ငံအတွက်လည်း အဲဒီလိုပဲ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ခံစားနားလည်နေပါတယ်။
ရော်နီညိမ်း ။ ။ ၀မ်ပေါင်သတ္ထုတူးဖေါ်ရေးကုမ္ပဏီဟာ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်နေတဲ့ တရုတ် ပြည်ရဲ့ နိုင်ငံတကာအဆင့် ကုမ္ပဏီကြီး ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်မှာက နှစ်ပေါင်း (၂၀)လောက် တရုတ် ပြည်ရဲ့ နိုင်ငံတကာအဆင့်ထက်နိမ့်တဲ့ ဒေသခံအဆင့်/ခရိုင်အဆင့် / ပြည်နယ်အဆင့် စတဲ့ တရုတ်ကုမ္ပဏီ တွေက၊ အများဆုံး လာပြီး စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေကြတော့၊ မြန်မာလူထုရဲ့ အမြင်မှာ တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တွေဟာ သိပ်အမြတ်ထုတ်လွန်းတယ်၊ မြန်မာပြည်ကနေ ရှိသမျှ အကုန်ခွာယူနေတယ်၊ ဘာမှ မကျန်အောင် ကိုပဲ ဆိုတဲ့ ခံစားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတာကို အခု ကျနော် နှစ် (၂၀)ကျော်ကြာပြီးတဲ့နောက်၊ ပြန်ရောက်လာ တဲ့အခါ တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ ၀မ်ပေါင်လို နိုင်ငံတကာအဆင့် တရုတ်ကုမ္ပဏီကြီးက ဒီလိုအချိန်မှာမှ ဒီ ကြေးနီ စီမံကိန်းကို မြန်မာပြည်မှာ လာလုပ်မိတာ၊ လွဲမှားတဲ့အချိန် လွဲမှားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေရှိနေတဲ့ နေရာမှာ လာ ပြီး လုပ်သလို ဖြစ်နေပါသလား။ ၀မ်ပေါင်ဟာ မြန်မာပြည်ထဲက တခြားသော အဆင့်နိမ့် တရုတ်စီးပွားရေးလုပ် ငန်းတွေလို မဟုတ်ဘူး / နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အကျိုးရှိအောင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတာပါလို့၊ ခင်ဗျားတို့ မြန်မလူ ထုကို ဘယ်လို ပြသမှာပါလဲ၊
Geng Yi ။ ။ မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ ခံစားမှုကို ခင်ဗျားလိုပဲ ကျနော်တို့လည်း နားလည်ပါတယ်။ တချို့ သော ဒီလိုခံစားမှုတွေကို၊ ကျနော်တို့က ဂရုတစိုက်ရှိရပါမယ်။ ဥပမာအားဖြင့် - ဒေသခံလူထုရဲ့ သူတို့ရဲ့ အနာ ဂတ်အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်တွေအတွက် ပူပန်နေကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ဟာ သတ္ထု တူးဖေါ်ရေးကုမ္ပဏီအနေနဲ့ သတ္ထုတူးဖေါ်ရေးလုပ်ငန်း/ သတ္ထု တူးဖေါ်ရေးစီမံချက်တွေ အပေါ်မှာ အထူးပြုလုပ် ဆောင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဟာ စီးပွားရေးအရ တွက်ခြေကိုက်ရေးတစ်ခုထဲ မဟုတ်ပဲ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် မထိခိုက်မပျက်စီးစေရေး၊ လူနေမှုဘ၀တွေ အရေးတွေကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါတယ်။ ဒေသခံလူထုတွေက အနာဂတ်အတွက် ပူပန်မယ် / သူတို့ရဲ့ ကလေးတွေရှေ့ရေးကို စိုးရိမ်ကြမယ်။ ကျနော်တို့က အဲဒီလို အားလုံး သော စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို နားထောင်ကြရပါမယ်။ ဒီလိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို ဖြေရှင်းပေးရေး ဒေသခံလူထုတွေနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြရပါမယ်။ ကျနော်တို့ဟာ ဖြေရှင်းမှုတွေ ရရှိလာပါလိမ့်မယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် မထိ ခိုက် မပျက်စီးစေရေးနဲ့ လူနေမှုဘ၀တွေ အရေးတွေအတွက် ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ ကျနော် အခိုင်အမာ ယုံကြည် နေပါတယ်။ ကျနော်တို့မှာ နည်းပညာရှိတယ်။ အတွေ့အကြုံရှိတယ်၊ ကျနော်တို့ရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလည်းပဲ ရှိ တယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာ ဒီကြေးနီစီမံကိန်းတစ်ခုထဲအတွက် မဟုတ်ဘူး။ ဒီဒေသတစ်ခုလုံးနဲ့ ဒေသခံလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လည်း ဖြစ်တယ်။ ဒါတွေဟာ နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေလည်း ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ဟာ နိုင်ငံတကာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို လိုက်နာတဲ့ တာ ၀န်သိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ စိတ်ရှည်သည်းခံစွာ အလုပ်လုပ်တဲ့ တရုတ်အစိုးရပိုင် သတ္ထုတူးဖေါ်ရေးကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါ တယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ ဒေသခံလူထုနဲ့ ကျနော်တို့ အလုပ်လုပ်ရပါမယ်။ တချို့တွေကလည်း သယံဇာတ ကျိန်စာ (Resources Curse) ဆိုတာကို ပြောကြတယ်။
ရော်နီညိမ်း ။ ။ ရှေ့ သတင်းပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ညချမ်းနဲ့ တနင်္လာနေ့ မနက်ခင်းတွေမှာ မြန်မာဝမ် ပေါင် ကြေးနီ ကုမ္မဏီ လီမီတက်ရဲ့  ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး Mr. Geng Yi နဲ့ သီးသန့်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း အပိုင်း(၄)ကို ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်သွားပါမယ် ခင်ဗျာ။ စောင့်မျှော်နားဆင်ကြပါ။ ကျနော် ရော်နီညိမ်းပါ။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာ အခြေစိုက်ထားတဲ့ ကြေးစင်တောင်၊ စံပယ်တောင်၊ စံပယ် တောင် (တောင်ပိုင်း) နဲ့ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း လေးခုကို၊ "မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင် လီမိတက်" Myanmar Economics Holding Ltd. (MEHL) နဲ့ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်နေပြီး တရုတ်နိုင်ငံက လာရောက်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံတဲ့ ကုမ္ပဏီကတော့ "မြန်မာ ဝမ်ပေါင် ကြေးနီသတ္ထုတူးဖေါ်ရေး လီမိတက်" Myanmar Wanbao Mining Copper Ltd. (MWMCL) ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ (၄)ရက်နေ့က၊ ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီရဲ့ ဖိတ်ခေါ် ချက်နဲ့ ဒီ ကြေးနီစီမံကိန်း လေးခုထဲက အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ လက်ပံတောင်းတောင်က ကြေးနီသတ္ထုတူးဖေါ်ရေး နယ်မြေရုံးမှာ ဗီအိုအေဝိုင်းတော်သား ဦးရော်နီညိမ်းက သွားရောက်ပြီး ဦးဆောင်ညွှန်ရေးမှူး Mr. Geng Yi ကို သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဒီအစီရင်ခံစာအတိုင်း အကောင်အထည်ဖေါ်ရေး အစိုးရဖွဲ့စည်းပေးတဲ့ ကော်မီတီ တစ်ရပ်လည်း ပေါ် ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ "မြန်မာ ဝမ်ပေါင် ကြေးနီသတ္ထုတူးဖေါ်ရေး လီမိ တက်ရဲ့ ရှေ့ဆက် ဆောင်ရွက်မယ့် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ Mr. Geng Yi နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်း ခန်း နောက်ဆုံးအပိုင်း (အပိုင်း - ၄) ကို၊ ဒီ သီတင်းပတ်ရဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးရာကဏ္ဍကနေ ထုတ်လွှင့် ပေးလိုက် ပါတယ်။
Geng Yi ။ ။ ဘာဖြစ်လို့ သယံဇာတကျိန်စာလို့ ခေါ်ကြသလဲဆိုတော့၊ သယံဇာတပေါကြွယ်ဝလှတဲ့ နိုင်ငံ တွေဟာ၊ ဒါတွေကို ရှာဖွေတယ်/ ထုတ်ယူသုံးစွဲတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနိုင်ငံတွေ ပိုပြီးချမ်းသာမလာပဲ နဂိုရှိရင်းစွဲ ထက် ပိုပြီး ဆင်းရဲသွားကြတယ်။ အဲဒါ ကျိန်စာပဲ။ ကျနော်တစ်ဦးထဲအမြင်အရတော့၊ ကျနော်တို့ရဲ့ ကြေးနီစီမံ ကိန်းဟာ ဒီလိုကျိန်စာမျိုးတွေကို တိုက်ဖျက်ပစ်ဖို့ အကောင်းဆုံးကြိုးစားလုပ်ဆောင်သွားမယ့် စီမံကိန်းမျိုးပါ။ ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီဟာ နှစ်ပေါင်း (၃၀)ကြာအောင် သတ္ထုတွင်းစီမံကိန်းတွေ သတ္ထုတူးဖေါ်သုံးစွဲမှုတွေအတွက် အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်။ ဒီအတွေ့အကြုံတွေအပေါ် မူတည်ပြီး၊ ဒီဒေသနဲ့ ဒီနိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျနော်တို့ တတ်နိုင်သမျှ ပါဝင်ဖြည့်ဆည်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ အခုအခါမှာ ကြေးနီလုပ်ငန်းကြးနီ သတ္ထုတူးဖေါ်ရေးနယ်ပယ်တွေကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းန်ာပယ်မှာ ကြေးနီဟာ အရေးအကြီး ဆုံး သတ္ထုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီကြေးနီသယံဇာတကို အသုံးချခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကြေးနီဟာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးလိုင်းတွေ၊ ကားတွေ၊ စက်ကိရိယာတွေ၊ ဆောက်လုပ်ရေး ကုန်ကြမ်းတွေမှာ မပါမဖြစ်ပါနေတဲ့ သတ္ထုဖြစ်လာပြီးတော့၊ ဘယ်စက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မဆို ကြေးနီကို လို အပ်နေပါတယ်။ တချို့နိုင်ငံတွေက သတ္ထုတွင်းလုပ်ငန်းတွေထဲ ကြေးနီကို နံပါတ် (၁) ထားကြပါတယ်။ ကြေးနီကို စက်မှုလုပ် ငန်းတကာတို့ရဲ့ မိခင် အဖြစ် သဘောထားကြပါတယ်။ ကြေးနီဟာ မြေကြီးထဲက ထွက်လာတာကြောင့် မြေကြီးနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်မှာလည်း ကြေးနီဟာ ပါပါတယ်။ အခုအခါ Cathode Copper လို့ခေါ်တဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့် ၉၉% သန့်စင်ပြီး ကြေးနီသန့် လက်ပံတောင်းတောင်ကနေ ထွက်လာ တော့မှာပါ။ သန့်စင်ပြီး ကြေးနီသန့်ကို ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာလည်း ထည့် သွင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်အတွက်ကော လူတိုင်းအတွက်ကော ပိုမိုကောင်း မွန်တဲ့ အနာဂတ်ကို ဖေါ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာပါ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ အစီရင်ခံစာက ဒီစီမံကိန်းကို ဆက်ပြီး လုပ်ကိုင်သင့်တယ်လို့ အားပေးထောက်ခံခဲ့တယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဒီလိုထောက်ခံမှု ဘာကြောင့်ရသလဲ ? ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်ကော မြန်မာပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးအတွက်ကော အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ် ဆိုတာ သူ တွေ့မြင်သွားခဲ့လို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ရော်နီညိမ်း ။ ။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ လက်ပံတောင်းကြေးနီစီမံကိန်းအကြောင်း အကျဉ်းချုပ် စာအုပ်ထဲမှာ၊ ဒီလက် ပံတောင်း တောင်ကနေ ကြေးနီသန်းချိန် (၃)သန်းထွက်ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှုဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း (၁၅၀၀) လောက်ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ စာအုပ် ထဲမှာ ဖေါ်ပြချက်အရ၊ ထွက်ရှိသမျှကြေးနီတန်ဖိုးရဲ့ ၄% ကို မြန်မာအစိုးရကို ခိုင်ကြေး (royality) အနေနဲ့ ပေးရမယ်။ ပြီးတော့တခါ ၈%ကို မြန်မာအစိုးရကိုပဲ ကုန်သွယ်ခွန် (commercial tax) အနေနဲ့ ပေးရမယ်။ တခါထပ်ပြီးတော့ နောက်ဆုံး ခုနက အခွန်ဆောင်တာတွေ ထုတ်လုပ်မှုစားရိတ်တွေ သဗ္ဗဒနာမ်ပေါင်း ကုန်ကျ စားရိတ် အစုစုကို နှုတ်လိုက်ပြီး အသားတင်ဝင်ငွေထဲကနေ ၁၅% ကိုလည်း၊ မြန်မာအစိုးရကိုပဲ ၀င်ငွေခွန် (income tax) အနေနဲ့ ပေးရမယ်။ အဲဒီတော့တခါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ငွေပမာဏ၊ အခွန်မျိုးစုံပေးဆောင်ရတဲ့ ပမာဏ၊ ထုတ်လုပ်မှုစားရိတ် ပမာဏ၊ ဒါတွေအားလုံးက ၀င်ငွေစုစုပေါင်းထဲကနေ နှုတ်ပြီး၊ အသားတင်အမြတ် ကို ခွဲဝေတဲ့အခါမှာ ဦးပိုင်က ၅၁% ရမယ်၊ ၀မ်ပေါင်က ၄၉% ရမယ်လို့ ဆိုထားတယ်။ အမြင်အရ မြန်မာဘက် အကျိုးအမြတ်တွေရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံရပြီး အများကြီးအသာရနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာ က မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ဒီ့ထက်ပိုပြီး ရသင့်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒီတော့ တကယ်တမ်း နိုင်ငံတကာစံသတ်မှတ် ချက်တွေအရ ထွက်ကုန်ခွဲဝေမှုစာချုပ် (Production Sharing Contract) စံအဖြစ် ဘယ်လို အချိုးအစားရှိ ပါ သလဲ။ အမြင်အရ ခင်ဗျားဝမ်ပေါင်က ဒီလောက်ရင်းနှီးပြီး ဒီလောက်ပဲ အမြတ်ရတယ်လို့ ဖြစ်နေတော့၊ အဲဒါ ကိုက နိုင်ငံတကာစံနှုန်းအရ နည်းနည်း နောနောမဟုတ်တဲ့ အကျိုးအမြတ်လား။ အဲဒါကိုက အတော်ကြီးကို ကိုက်နေလို့ လာလုပ်တာလား။ နည်းနည်း ရှင်းပြပေးပါ။
Geng Yi ။ ။ ကျနော်တို့ ဒီကို လာခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ လေ့လာ တယ်။ မျှမျှတတရှိတဲ့ အကျိုးအမြတ်ရရှိ ရေး အတွက် သိပ်ကို ကြီးမားလှတဲ့စွန့်စားမှုကြီးကိုလုပ်ဖို့ ကျနော်တို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သုံးဆယ်က တရုတ်ပြည်ရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ စတင်ခဲ့ တဲ့ သတ္ထုတွင်းစီမံကိန်းတစ်ခု အကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းအတွက် တရုတ်ပြည်မှာ ငွေအလုံအ လောက် မရှိပါဘူး။ နည်းပညာတို့ စီမံ ခန့် ခွဲမှုပညာတို့ အတွေ့အကြုံတို့လည်း အလုံအလောက်မရှိပါဘူး။ ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာစံသတ် မှတ်ချက်တွေ လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေ အတတ်ပညာတွေကို သိရှိနားလည် မှုလည်း မရှိပါဘူး။ ဒီလိုဆိုတော့ ဒီ ပထမဆုံးသောဖွံ့ဖြိုးတက်ရေး စီမံကိန်းကို ကျနော်တို့ ဘယ်လိုလုပ်နိုင်ကြ ပါ့မလဲ ဆိုပြီး ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငွေနဲ့ တကွ ခုနပြောတဲ့ဟာတွေ အကုန်လုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ လိုပါတယ်။ ပြည်ပကနေ လာပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးကို တွန်းအားပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒီ ပြည်ပက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွန်းအားဟာ၊ ကောင်းမွန်တဲ့ မူဝါဒဆီကနေ လာပါ တယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ မူဝါဒဟာ ပြည်ပက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကို မျှမျှတတရှိတဲ့ တချို့သော စီးပွားရေးမက် လုံးတွေကို ပေးရပါတယ်။ အဲဒီကျမှ ပြည်ပက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ စိတ်ဝင်စားကြမယ်။ လာပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်ရဲ့ ပထမဆုံးသော နိုင်ငံခြားနဲ့ဖက်စပ်လုပ်တဲ့ သတ္ထုတွင်း စီမံကိန်းဟာ ၁၉၈၂ မှာ စခဲ့ပါတယ်။ ရှန်ရှီပြည်နယ်က ကျောက်မီးသွေးတွင်း စီမံကိန်းပါ။ အဲဒီအချိန်က တရုတ်ပြည်ရဲ့ ခေါင်းဆောင် တန်ရှောက်ပိန်ဟာ စီးပွားရေး မူဝါဒတွေကို ရေးဆွဲတဲ့ အဓိကပုဂ္ဂိုလ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကနေ အလွန်ထင်ရှားတဲ့ စက်မှုလပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထဲကနေ ဒေါက်တာ အာမန်ဟန်းမားဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့က ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ် (UCLA - University of California Los Angeles) မှာ ဒေါက်တာအာမန်ဟန်းမားပြတိုက် ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဒီကျောက်မီးသွေးတွင်း စီမံကိန်းက သိပ်ကိုကြီးပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ငွေပမာဏနဲ့ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း (၃၀၀) လောက်ရှိပါတယ်။ နည်းပညာတွေ ကျနော်တို့ကို ပေးနိုင်သမျှ များများပေးဖို့အတွက်၊ တရုတ်အစိုးရကနေ မက်လုံးအများကြီးပေးပြီး ဒီအမေရိကန်ကုမ္ပဏီ လာပြီး ရင်းနှိးမြှုပ်နှံ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီတုံးကလည်း ခေါင်းဆောင်တန်ရှောက်ပိန်ဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့သယံဇာတတွေကို ရောင်းစားနေတယ်လို့ စွပ်စွဲမှုတချို့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ မစ္စတာတန်ရှောက်ပိန် ပြန်ပြောခဲ့တာက၊ "အခု ဒေါက်တာ ဟန်းမားဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တစ် ယောက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း (၃၀၀)နဲ့ တရုတ်ပြည်ကို ရောက်လာခဲ့ပြီ၊ နောက်ထပ် ဒေါက်တာ ဟန်းမားလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး အယောက် (၁၀၀) ရောက်လာခဲ့ရင်၊ တရုတ်ပြည်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဒေါ်လာ ဘီလျံ (၃၀) ရလာမယ်၊ ဒါဟာ တရုတ်ပြည် တံခါးဖွင့်ဝါဒရဲ့ အစပဲ ရှိသေးတယ်။ ဒီနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကို ဒီထက်မက မက်လုံးတွေ ပိုပေးလိုက်ဦး၊ တရုတ်ပြည်အတွက် သိပ်ကို အများကြီးကို တန်နေသေးတယ်" လို့ ပြောခဲ့ပါ တယ်။ တန်ရှောက်ပိန်ပြောခဲ့တာ မှန်လားမမှန်ဘူးလားဆိုတာ (၅) နှစ်လောက်အကြာမှာ သက်သေပြလာပါ တယ်ဒ ဒေါကတ်ဟန်ဒမားရဲ့ အမေရိကန်ကုမ္စဏီကို တရုတ်သတ္ထုတွင်းလုပ်ငန်းမှာ နှစ်(၃၀)ကြာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လုပ် ကိုင်ခွင့် ပေးလိုက်ပြီး (၅)နှစ်အကြာမှာ၊ တရုတ်ပြည်ရဲ့ သတ္ထုတွင်းလုပ်ငန်းအဆင့်အတန်းဟာ ခေတ်မှီ နည်းပညာ ခေတ်မှီစက်ကိရိယာ အလုပ်သမားတွေရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု မန်နေဂျာတွေရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု စတာတွေမှာ၊ နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်းနဲ့ ကွာဟနေမှု လျော့ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ အခု နှစ်(၃၀)အကြာမှာတော့၊ တရုတ်ပြည် ရဲ့ သတ္ထုတွင်းလုပ်ငန်းအဆင့်အတန်းဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ ဘာမှ မကွာတော့ပါဘူး။ အခု ဒီကျောက်မီး သွေးတွင်းကို တရုတ်နိုင်ငံသားတွေပဲ စီမံခန့်ခွဲ လည်ပတ်နေပါပြီ။ ဒါဟာ ဘယ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံအတွက်မဆို စံပြ နမူနာတစ်ခုပဲလို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။
ရော်နီညိမ်း ။ ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သိချင်တာက၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်က နောက်ဆုံး အကြံပြု ထောက်ပြထားတဲ့ ဒီစီမံကိန်းဟာ ဆက်ပြီး လုပ်သင့်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက် (MEHL) တို့ကြားက ချုပ်ဆိုထားတဲ့ ကန်ထရိုက်စာချုပ်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရေးဆွဲရေး ဆိုတာကို၊ ၀မ်ပေါင် က ဘယ်လိုလုပ်မှာပါလဲ။
Geng Yi ။ ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင် နောက်ကြောင်းကိုပါ နည်းနည်းပြောရပါမယ်။ အခု ချုပ်ဆိုထားတဲ့ ထုတ်လုပ်မှုအကျိုးအမြတ်ခွဲရေးကန်ထရိုက်စာချုပ် (Production Sharing Contract – PSC) နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောရရင်၊ တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ မတူကြ ပါဘူး။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက သတ္ထုတူးဖေါ်ရေးနယ်ပယ်မှာ၊ အခု ၀မ်ပေါင် နဲ့ဦးပိုင်တို့ ချုပ်ထားတဲ့ စာချုပ်ဟာ လုပ်လေ့လုပ်ထ အလွန်နည်းတဲ့ စာချုပ်မျိုးပါ။ ဒါကို ဒီစီမံကိန်းကို လာလုပ် ချင်ကြတဲ့ အနောက်နိုင်ငံကုမ္ပဏီတွေ နောက် ဘေးထွက်သွားကြရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းလည်း ဖြစ်ပါ တယ်။ နိုင်ငံတကာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမျိုးမဟုတ်တဲ့ အတွက် အနောက်နိုင်ငံကုမ္ပဏီတွေ နားမလည်ကြပါဘူး။ အခုထိကို သူတို့ နားမလည်နိုင်ကြသေးပါဘူး။ သူတို့ကတောင် မြန်မာသတ္ထုတွင်းဝန်ကြီးဌာနကို ဒါကို နိုင်ငံ တကာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့အညီ ပြန်ပြင်ဖို့ ပြော ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကို ကျနော် ဘာလို့ထည့်ပြောရလဲဆိုတော့၊ ဒီလို ကန်ထရိုက်စာချုပ်ဟာ စီးပွားရေးအရ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူအတွက် သိပ်ကို ကြီးမားလှတဲ့ စွန့်စားမှုကြီးပါ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်က နောက်ဆုံး အကြံပြု ထာက်ပြထားတဲ့ ဦးပိုင်လီမိတက်နဲ့ ကျနော်တို့ ရဲ့ ကန်ထရိုက်စာချုပ်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရေးဆွဲရေး ဆိုတာကို၊ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေး အတွက် ကျနော်တို့ မူရင်းစာချုပ်ကို စပြီးလေ့လာ နေပါတယ်။ ကျနော်တို့က အကြံပေးချက်တွေကို နားထောင်မယ်။ တရားဥပဒေ နဲ့အညီ အကျိုးအကြောင်းညီညွတ်တဲ့ ပြင်ဆင်မှုကို လုပ်မယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့။ ကျနော်တို့ ဒါကို စတင် လုပ်ဆောင်ပြီးနေပါပြီ။
View or Download here Interview by Future magazine